Ny Valosoa Vaovao, 3 Janoary 2019. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Mbs Vaovao, alarobia 2 Janoary 2019.
Mbs Vaovao, 3 Janoary 2019. →
Praiministra sy ny Préfet
Mankasitraka ny hala-bato sy ny hosoka tamin’ny fifidianana
Na nisy aza omaly, ny fanakantsakanana natao tamin’ireo mpitolona mitaky ny fahamarinan’ny fifidianana feno hosoka sy halatra, natao ny 19 desambra teo amin’ny kianjan’ny 13 mai dia hitohy tsy hihemotra intsony izany . Mitsangana ny andrimasom-pokonolona manomboka izao araka ny nambaran’ireo mpitarika . Ny tena mampanontany tena ny olona dia nandeha tsy nisy sakana ny tolona ny sabotsy teo , nivadika anefa izany omaly satria lasa nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ireo mpitandro filaminana araka ny baikon’ny Praiminisitra sy ny Prefektiora, izay hita fa tena saribakolin’i Andry Rajoelina mihitsy izy ireo, miaro ny tsy fahamarinana sy ny hala-bato nisy.
Raha ny vaovao farany azo dia ny fisian’ireo « écrans géants » napetraka eo anoloan’ny lapan’ny tanàna hampisehoana ampahibemaso ireo endrika hosoka sy hala-bato miharihary natao taloha sy nandritra ny fifidianana no tena « tsy zakan’ny Prefektiora sy ny Praiminisitra . Voalaza fa azo atao indray ny hetsika raha tsy misy ireo écrans ireo. Tsy hihemotra anefa fa hiroso hatrany hanohy ny hetsika ireo olona eny an-kianjan’ny 13 mey, na eo aza ny fanenjehana sy ny baomba alefan’ireo miaramila. « Manameloka ny hery famoretana sy ireo naniraka azy hampiasa herisetra amin’ireo vahoaka tonga teo tam-pilaminana sady tsy nanakorontana izahay » hoy Me Hanitra Razafimanantsoa. Raha ny mpibaiko ireo mpitandro filaminana amin’ny fampiasana hery fandravana fihetseham-bahoaka dia ny Praiministra Ntsay Christian no mpanome baiko, mpanatanteraka ny Préfet de Police ny Jeneraly Angelo Ravelonarivo ary mipaka amin’ireo mpitandro filaminana eny an-kianja izany baiko izany.
Ny Praiministra dia lehiben’ny governemanta napetraky ny Mapar, noho izany dia manatanteraka ny baiko avy amin’i Andry Rajoelina, kandidà mpangala-bato ity lehibena governemanta ity, koa tsy mahagaga raha mampihàtra an-jambany ny fahefany ho famoretana ireo vahoaka manao hetsika mitaky ny fahamarinana. Na izany na tsy izany, hitohy anio amin’ny 10 ora maraina indray ny hetsika ho fitakiana ny fahamarinana amin’ny fifidianana eny amin’ny kianja manan-tantara 13 mey eny Analakely anio.
Maro ny naratra, nampiasa herim-pamoretana ny fitondràna MAPAR
Niraraka indray ny rà teo amin’ny kianjan’ny 13 mey omaly nandritra ny tolona nataon’ny vahoaka Malagasy, mitaky ny fahamarinana eto amin’ny firenena . Nisy ny fampiasàn’ny fanjakàna ireo herim-pamoretana teny an-toerana tamin’ny alalan’ny fampiasàna ny baomba mandatsa-dranomaso mahery vaika, niaraka tamin’ny tifitra vary raraka tamin’ny bala fingotra tamin’ireo vahoaka tsy nitondra hafa-tsy tanampolo . Vokatr’izany , maro indray ireo Malagasy no nandatsaka ny ràny , izay tsy nirian’ny vahoaka mihintsy izany . Tolona am-pilaminana tahaka ny natao tamin’ny andro voalohany ny sabotsy teo no noeritreretina natao amin’ny fitakiana ny tena fahamarinana eto amin’ny firenena fa tsy tolona misy sakoroka araka ny fitenin’ny tanora sy mandatsa-drà tahaka ny ataon’ny fitondràna MAPAR toy izao .
Vao mangiran-dratsy dia tonga teo amin’ny kianja manodidina ny 13 mey ny foloalindahy polisy , miaramila ary zandary marobe miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika . Tao amin’ny lapan’ny tanàna Analakely , sahirana ireo mpiasa satria tsy navela hiditra tao amin’ny toeram-piasàny ireo mpiasa tamin’ny ora fidirany . Asa ho an’ny daholobe na service public no atao ao amin’ny lapan’ny tanàna , ka tsy tokony hampiasana herim-pamoretana tahaka izao . Amin’ny olona rehetra sendra ny gazety teny an-toerana dia vaky vava daholo sady kivy hoe : izao ve no hiainana raha sanatria ka lany ho filohampirenena i Andry Rajoelina .
Vao tapany fotsiny aza izay Praiminisitra notendreny no mitondra ny fanjakàna vokatry ny tolona teny amin’ny 13 Mey nataon’ireo depiote nitaky ny fiovàna 73 tamin’ny 21 aprily 2018 dia efa izao sahady no zavatra iainana , koa maika fa raha Rajoelina no mahazo fahefàna feno, tsy asa a ! Raha navela hiditra malalaka tao amin’ny kianjan’ny 13 mey anefa ireo vahoaka mitaky ny fahamarinana dia efa nirava am-pilaminana tsy nampiasana herisetra izy ireo . Ka eto dia amafisina fa ny fitondràna mihintsy eto no mamboly korontana eto amin’ny firenena fa tsy ireo vahoaka mitaky ny fahamarinana velively .
Tsy maintsy sarotiny amin’izay hahasoa ny fireneny
Hadisoana bevava atao amin’ny firenena ny fitazanam-potsiny tsy mandray andraikitra amin’ny hihanahan’ny ratsy. Adidy masina mivesatra eo an-tsorok’izay mbola mahatsiaro tena ho Malagasy ray Malagasy reny ary rà Malagasy no mikoriana ao anatiny ny filofosana hametraka zavatra tsara sy soa eto amin’ny firenena. Tsy tokony hafangaro araka izany ny fijery amin’ny lafiny ara-panahy sy ny lafiny fiainam-pirenena.
Tsy hoe tsy tokony hifandray sy tsy ilaina io lafiny iray io fa tsy tokony hatao ao anaty kitapo iray na bango tokana velively izy ireo. Eo ny ilàna ny fahaizana manavaka “discernement”, ary raha tsy mahay izay dia tsy tokony haneho hevitra amin’izay fampifangaroana izay hamitaka vahoaka fa mila mianatra tsara aloha. Misy mantsy olona, misy mpitondra fivavahana, mitady hamilivily ny resaka amin’izany, ka ahatonga ny olom-pirenena ho sahiran-tsaina amin’ny toe-java-misy ankehitriny, ka hitarika azy hihalangalana tsy handray andraikitra. Tsy maintsy mijery ny zava-misy eto amin’ny fireneny ny olom-pirenena mahatsiaro ho tompon’andraikitra sy sarotiny amin’ny fireneny.
Fotoana izao hitsipahana ny foto-pisainana nafafin’ny mpanjanatany tamin’ny fotoan’andro ny amin’ny fampisaraham-bazana ny vahoaka Malagasy mba hahafahana mifehy azy sy mandroba ny hareny, fa firaisan-kina hiady ny hampanjaka ny rariny sy hitsiny eto amin’ny firenena no zava-dehibe. Mila mijery ny zava-misy iainany sy ny an’ny manodidina azy ny tsirairay ary manokatra ny sainy tsara dia ahita sy ahafantatra ny zavatra tokony ataony manomboka izao. Tsy misy jamba lalina toy ny minia mikimpy, hoy ny fitenenana. Tsy lavina, mety hisy olona sasantsasany hanao izany ihany noho ny vola nanajamba ny masony sy ny tsipitsipy kely tsy mahavita volana akory, fa ny olom-pirenena vanona sy mitsinjo izay hahasoa ny fireneny sy ny taranany tsy ho voasarik’izany velively.
Liva avy amin’ny KMFB
Mitady hirika mafy eto Madagasikara ny Franc-maçon
Anisan’ny firenena nitondra faisana sy nandraingiraingy , ary niaina tao anatin’ny fahantrana lalina dia lalina nandritra ny taona maro ny firenena malagasy sy ny vahoakany hoy i Liva avy amin’ny KMFB (Komity Miaro ny Fiainam-Bahoaka), noho ny herin’ny maizina avy any ivelany , izay nandidy sy nibaiko, ka nitondra ankolaka ity firenena malalan-tsika ity hatrizay. Raha ny tantaran’ireo mpitondra filoham-panjakana nifandimby teto Madagasikara no jerena, dia fatantsika tsara fa efa samy mpikambana tao anatin’ilay fikambanana maizina malaza eran-tany antsoina hoe : « Franc-maçon » avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Amam-polo taonany maro no efa niasa sy nonina teto io fikambanana satanika io. Efa maro noho izany ny olony eto. Rehefa rafi-panjakana mijoro, dia misy ny olony avokoa.
Mbola manginy fotsiny ihany koa ny fisian’ireo fikambanana mpanao asa-soa iraisam-pirenena marobe matanjaka izay efa miparitaka sy miasa manerana an’i Madagasikara. Fikambanana faran’izay matanjaka ny Franc-maçon eto ambonin’ny tany, ka mahavita mandidy sy manapaka ary mibaiko ny toe-karen’ny firenena iray. Saika voafehiny avokoa ireo sehatra famatsiam-bola iraisam-pirenena matanjaka eran-tany toy ny FMI sy ny Banky Mondialy, sns…, satria izy no tompon’ny vola. Tsy maintsy potika izay firenena iasany. Na rotiky ny ady an-trano, na rotiky ny fahantrana. Na dia eo aza anefa izany tanjany niseho tamin’ny lafiny maro izany, dia izao no azo ambara : sahirana, ary tsy mahita rirany eto Madagasikara ny Franc-maçon. Efa nanao izay fomba rehetra izy hanapotehana sy hampiadiana ny samy malagasy, toy izao fanerena ny malagasy hanao fifidianana ao anaty hosoka sy hala-bato manarapenitra izao, fa tsy lasa, ary tsy ho lasa lavitra, satria hafa ny malagasy, tsy mitovy amin’ny Afrikana. Na ireo mpikambana ao anatiny ihany aza dia milaza sy miaiky fa firenena hafa mihitsy i Madagasikara sy ny vahoakany. Ho an’Andriamatoa Liva dia tena misy ny tanan’Andriamanitra mihazona ity firenena ity. Ekena fa mbola maro ireo mpanompo sampy eto Madagasikara, kanefa maro ihany koa ireo vondron’olona sy sampana kristiana tena tsy manao raharaha hafa-tsy ny mandohalika sy mitondra am-bavaka ity firenena ity. Izany antony lehibe izany no mahatonga an’Andriamatoa Liva filohan’ny KMFB sahy milaza fa : tsy maintsy ho afaka amin’ity taona 2019 ity i Madagasikara malalantsika. Hataontsika veloma tsy ho ela i La France sy ny asa ratsiny rehetra napetrany teto hatrizay. Ilaina noho izany ny firaisankinantsika vahoaka malagasy rehetra, hanao angaredona hikarohana ny marina rehetra mikasika izao fifidianana feno hosoka sy habibiana izao, mba hahafahantsika manangana ilay tena fanorenana ifotony.
Mijoroa ho mpitsara marina ry mpitsara ao amin’ny HCC
Tsy namelan’ny CENI fa dia navoakany na dia tsy mbola amin’ny fomba Ofisialy aza ny valim-pifidianana vonjimaika izay nokarakarain’izy ireo. Efa maro be ny nanakiana sy tsy nankatoa iny voka-pifidianana iny noho ny fahitana ny hosoka bevata sy hala-bato efa voaomana nialohan’ny niatrehana iny fihodinana faharoa iny. Niaraha-nahalala ireo porofo marobe tratra tamin’izany kanefa dia nodian’ny CENI fanina fotsiny izany noho ny fitiavam-bola be sy fandohalihana manoloana an-dRajoelina Andry. Hita porofo hoy i Pr Harimalala Joseph fa noteren-ko masaka iny voka-pifidianana iny hampandaniana sy hankatoavana hatrany ny fanonganam-panjakana efa nisy teto Madagasikara fotsiny. Ny tsara ho fantatry ny Mapar sy ny forongony anefa hoy ity mpandinika ity dia tsy mba noheverin’izy ireo fa tsy hitondra filaminana maharitra eto amin’ny firenena ny vokatry ny fanolanana ny safidim-bahoaka ary tsy hitondra fiadanana ho an’ny hoavin’ny taranak’izy ireo akory ny hala-bato nataony.
Tsy vitan’izany fa fampihorohoroana sy fandatsahan’ain’olona no hiakarany eo amin’ny fahefana maminy loatra io, ka hampitahorana sy hampihorohoroana indray ny vahoaka maro an’isa amin’ny alalan’ny didy jadona. Eo anatrehan’izany dia mazava ny ambaran’Andriamanitra, voasoratra ao amin’ny Jaona 8:44 manao hoe: “Hianareo avy tamin’ny Devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy mpamono olona hatramin’ny taloha ary tsy nitoetra tamin’ny marina. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga”. Eo anatrehan’izany dia manao antso avo amin’Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo tompon’andraikitra misahana ny fifidanana ny tenako, hoy Pr Harimalala Joseph mba handini-tena sy handinika ny ratsy nataony mba hamerina ny anjara-vaton’ny kandida Ravalomanana Marc izay nagalarinareo, mba hahazoanareo famindrampo amin’Andriamanitra, satria dia hianareo ihany no ho kendan’ny vato nangalarinareo ireny aoriana ao, satria hoy ny tenin’i Jesosy Kristy ao amin’ny bokin’i Ezekiela 33: 14-15 manao hoe: “Ary koa, raha hoy izaho amin’ny ratsy fanahy: ho faty tokoa hianao; nefa mialà amin’ny fahotany izy sady manao izay marina sy izay mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny araka ny didy mahavelona ka meloka, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty.
Koa antso avo no atao aminareo ray aman-dreny eny amin’ny HCC satria izy ireo no tompon’ny teny farany amin’ny fanamarinana ireo hosoka sy ny hala-bato, ka dia mba hitsara araka ny hitsiny izy ireo raha te hitsinjo tokoa ny ho avin’ny taranaka sy i Madagasikara manontolo ihany koa. Fa hoy ny tenin’i Jesosy Kristy araka izay ambaran’ny bokin’ny Ohabolana 14:34 manao hoe: “Ny fahamarinana manandratra ny firenena; fa ny ota kosa dia fahafaham-baraka amin’ny olona. Fehiny, ankaherezina ianareo eo anivon’ny HCC mba ho mpitsara marina sy hatahotra an’Andriamanitra ka tsy hamela an’i Madagasikara hoviravirain’i Andry Rajoelina sy ireo Mafia miaraka aminy, izay efa namotika azy nandritra ny 5 taona nandritra ny tetezamita no nankaty, hoy mantsy ny tenin’i Jesosy Kristy ao amin’ny bokin’ny Mpanjaka voalohany 3:27 manao hoe: “Dia namely ny Mpanjaka ka nanao hoe: omeo itsy ny zaza velona, fa aoka tsy hovonoina: fa io mihitsy no tena reniny”. Mino sy mahatoky izahay ry HCC fa ho Ray aman-dreny tokoa hianareo ary hanana toe-panahy tahaka izay ananan’ny Mpanjaka izay tokoa hianareo.
Ny tsara ho marihina ihany koa mantsy dia nahagaga fa Alarobia in-3 no nanaovan’ny Mapar ny fifidianana fihodinana voalohany hatramin’ny fihodinana faharoa ary nofaranany tamin’ny Alarobia alina tamin’ny 12 ora alina ilay fampitahana ny voka-pifidianana. Izany hoe efa vitan’ny Franc-maçon ny kajikajy isan-karazany niaraka tamin’ny CENI izay manome ny 7+19=26 izany? Ka tsy maintsy nampitsahatra ilay fampitahana ve noho izay antony izay ny zanaky ny maizina? Noho ireo antony ireo dia hijoro hanao ny fitakiana ny vahoaka amin’ity anio ity indray araka ny voasoratra ao amin’ny bokin’i Daniela 9:27 manao hoe: “Ary hanorina fanekena ho herinandro amin’ny maro izy ary hampitsahatra ny fanatitra hafa hatramin’ny antsasaky ny herinandro, ary amin’ny elatry ny fahavetavetana no hiavian’ny mpandrava, hatramin’ny fahafonganana voatendry izay haidina amin’ny mpandrava, …. Izay mitohy ao amin’ny Ezekiela 32: 2-4 manao hoe: Ry zanak’olona; manaova hira fahaleovana ny amin’ny Farao, mpanjakan’i Egypta, ka ataovy aminy hoe: nanao ny tenanao tahaka ny liona tanora tamin’ny firenena hianao, kanjo tahaka ny Dragona ao amin’ny ranobe ary nitsoriaka teny amin’ny oninao hianao dia nanakobakobana ny rano tamin’ny tongotrao ka nahaloto ny ony. Izao no lazain’i Jehovah tompo: ny vahoaka betsaka tafatambatra no ho entiko mamelatra ny haratoko aminao ary hakarin’ireny amin’ny haratoko hianao dia hatsipiko eny an-tanety hianao ary hariako any an-tsaha dia hampitangoroniko eo aminao ny voro-manidina rehetra ary homeko hivokisan’ny bibidia rehetra ny tenanao”. Ambava homana tompoko!
Zandary sy tafika teo amin’ny 13 mey
Tsy nitovy ny tambin-karamany
Raha araka ny vaovao voaray dia tsy nitovy ny tambin-karama nomen’ny mpaniraka dia ny fitondrana Ntsay Christian, ireo mpitandro filaminana nanao famoretana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey omaly tontolon’ny andro. Fantatra tamin’izany fa nomena tombon-dahiny tamin’izany tambin-karama izany ireo zandary teny an-toerana; hatramin’ny omaly sy afak’omaly dia efa nome vola 20000 Ar avy ireo zandary teny Anakakely. Ho an’ireo tafika teny an-toerana kosa anefa dia tsy nomena hafa-tsy 15000 Ar, isam-batan’olona izy ireo. Noho izay antony izay, misy ny fimenomenonana amin’izao fotoana amin’ireo mpitandro filaminana alefa manao famoretana eny an-kianja ireo. Ho an’ny tafika dia kolonely iray no efa namoaka ireo miaramila tamin’ny toby hatramin’ny afak’omaly ary nizara vola ho azy ireo.
Toy izany koa ho an’ny zandary, jeneraly iray amin’ny fari-piadidiana no efa namoaka azy ireo tany amin’ny toby hatramin’ny afak’omaly ihany koa ary nizara ny vola ho an’ireo vatana zandary nampiasaina. Kolonely iray akaiky an’i Andry Rajoelina no nitondra ny vola nozaraina tamin’izy ireo avy. Izay no antony tsy maintsy nanapoahan’izy ireo baomba mandatsa-dranomaso omaly, na efa nahazo niditra an-kalalahana teo amin’io kianja manan-tantara eo Analakely io azan y sabotsy teo ireo mpitolona mitaky ny fahamarinana tamin’ny fifidianana.
HO AN`NY KOMITY MAHALEOTENA (CENI)
`Zay mahatolotolotra ihany ary ve
No lazaina fa tompon`ilay fandresena ?
Mba mahalalà menatra olona re
Ry komity mitonona ho mahaleotena !
Tsarovy fa efa mitanjaka anie
`Ty nareo “mody gisa” sy tia miala bala e!
Sao dia efa komity andevozin`ny drala e!
Ny toeranareo , mierinerina be
Ka dia hitam-bahoaka sy tena tsy miery.
F`efa hogahogain`ireo olo-mijery !
Na mora na sarotra dia maneke
Fa ny vokatra hatreto dia mampiahiahy !
Ry komity ivondronan`ny maty fanahy !
Ny marina , tsy azo totofana anie
Ka hanody anareo ny alahelom-bahoaka e !
Ry komity malaza fa tsy misy hapoaka !
DADAN`i ZINA (31-12-18)
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Ny Valosoa Vaovao 3 Janoary 2019. Ajoutez ce permalien à vos favoris.